ပန်ဒိုရာ: ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ စပိတ်တစ် ဖဲတစ်ချပ်
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများကွာ ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်လို့ ပြောရမလိုပဲ.. အနော်လည်း သတိရနေတာ မပန်ရေ့.. ပိုစ့်တင်ထားတယ်.. အစိမ်းရောင်ခွေးချေး ဘက်လက်နဲ့ကောင်မလေး.. =P
အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့မှာပဲ...တကယ်ကို လွမ်းစရာ အမှတ်တရပါပဲ..။
အားလုံးကို အမှတ်ရရစွာနဲ့ပဲ အဲဒီ ၀တ္ထုကို အဆုံးအထိ တခေါက် ထပ်ဖတ်သွားတယ်။
မြန်မာ Blogger တွေပါဝင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Bloggerသိုင်းကား တကား ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပြင်လွန်းလို့ အားလုံးကို အကယ်ဒမီ ပေးလိုက်ပြီ။ မြန်မာ Bloggerတွေရဲ့ ညီညွတ်မှူကို ပြတဲ့ ဒီpostလေး အတွက် ကြိုးပမ်း ပါဝင်ခဲ့သူ အားလုံး congratulation ပါ။
မပန်ရေ.. လွမ်းသွားဘီ.. =(
မပန်ရေ.. ဒီဝတ္တုကို အမ စဖတ်ခါစတုန်းက ကိုယ်တိုင်တောင် blog မရေးမိသေးဘူး... တခြားလူဆီက လင့်နှိပ်ရင်း မဂျစ် ဘလော့ခ်ကို ရောက်ပြီး ဖတ်လိုက်ရတာ.. အဲဒီအချိန်မှာ ဘလော့ခ်ဂါတွေ တော်တော်များများကို ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာ သိတော့ ပိုပြီး သဘောကျ၊ ပိုပြီး ရီရတယ်လို့ ခံစားရတယ်..
ပြန်ဖတ်သွားတယ်ဗျ ဂွဒ် ... ကျွန်တော်က ငယ်သေးတော့ အဲဒီထဲမှာ မပါသေးဘူးး :P
အီးး မပန်ကြီး အဲ့လိုမျိုး ထပ်ရေးကြရအောင်... :(
အဲဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး အားကျ ခဲ့လို့ ဘလော့ဂ် လောကထဲမှာ အခုထိ ဆက်လက်ရှင်သန် နေတာ သူ့ရဲ့ တွန်းအားပေါ့၊ အလွမ်းတယ် မပန်ရေ၊ အဲဒီ အချိန်တွေ ပြန်လိုချင်တယ်၊
ဘယ်အရာတွေကြောင့် ဒီလိုအချိန်တွေ ပြန်မရနိုင်တော့တာလဲ. စဉ်းစားနေမိတော့တယ်ဗျာ.
ကျွန်တော်လည်း ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်ညွှန်းပြီး တင်ချင်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်က ဘယ်လိုပျော်ခဲ့ကြရဖူးတယ် ဆိုတာကို အားလုံးဝေမျှသိရှိနိုင်ကြစေဖို့ပါ...
အဲဒီဝတ္ထုထဲက ရပ်ကွက်လူကြီးကို သဘောကျသဗျိုး။
အဲဒီတုန်းကဆို နှစ်နာရီ တစ်ခေါက်လောက် update တွေကို ၀င်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၀င်ရေးချင်ပေမယ့် ခက်တာက (စာသိပ်မရေးတတ်တာ ခဏထား) ခေါင်းစဉ် ကတည်းကနေကို နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီ စပိတ်တစ် ဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း ၀တ္ထုက ခနလေးနဲ့ ဆုံးသွားတယ်။ အစ်မတို့တွေ ရေးနေတာကို ကြည့်ရတာတော့ ပျော်ဖို့ကောင်းမယ့်ပုံဘဲ။
ဒီပို့စ်ကို မပန်စီမှာရော မဂျစ်စီမှာပါ ဖတ်သွားတယ်။ ဟာသတွေရော အဆွေးတွေနဲ့ ပျော်စရာကြီး။ :D